USisulu usolwa ngokukopela inkulumo yomunye usopolitiki | Scrolla Izindaba
USisulu usolwa ngokukopela inkulumo yomunye usopolitiki
Usephinde wabangundabamlonyeni kuleli sonto uNgqongqoshe wezokuVakasha uNksz Lindiwe Sisulu ngemuva kokusolwa ngokukopela inkulumo kasopolitiki wase-UK yango-2013.
NgoLwesithathu, i-IOL ishicilele lokho okubhalwe nguSisulu ngenkathi ephendula ukugxekwa akutholile ngodaba lwangaphambilini alubhalile mayelana nobuholi bezwe, abezobulungiswa kanye nomthethosisekelo.
Udaba lwangoLwesithathu aluzange lunakwe kakhulu kuze kwaba yilapho umhlaziyi wezepolitiki uGareth van Onselen ebona okuthile okujwayelekile.
Ngesikhathi ehlolisisa kahle, uVan Onselen uthole ukuthi ingxenye ethile yombhalo ifana ncamashi nenkulumo eyashiwo ngo-2013 ngowayengummeli Jikelele wase-UK kanye nosopolitiki we-Conservative Party uDominic Grieve.
Eqinisweni, uma kunegama elilodwa noma amabili, kubonakala sengathi uSisulu ukopishe inkulumo kaGrieve injengoba injalo.
Kunezingxenye ezimbili esithombeni esingenhla. Kwesokunxele kukhona inkulumo kaGrieve kanti kwesokudla kunendatshana kaSisulu ayikopishile.
Okhulumela uSisulu, uSteven Motale, uthe izinsolo ziwumbhedo wathi uyisiphukuphuku ocabanga ukuthi ungqongqoshe ukopishe inkulumo yomunye umuntu.
“Ukukopela kwenzeka uma umuntu obhala okuthile, esebenzisa amagama nemicabango yomunye umuntu ngaphandle kokubhala umbhali woqobo waleyonto,” kusho uMotale etshela i-News24.
“UNgqongqoshe uSisulu ucaphune umbhali, umthombo, ucezu oluthile lwenkulumo kanye nosuku okushicilelwe ngalo isinqumo senkantolo,” eqhubeka.
Uma sikhuluma iqiniso, uSisulu uyibhalile imithombo yababhali ababili acaphune inkulumo yabo: isazi sefilosofi uSolwazi Joseph Raz kanye nesazi somthetho esivelele sase-UK uLord Tom Bingham.
Akukho lapho akhulume khona ngoDominic Grieve.